Onye amụma tiri mkpu ka e nyere ya aka (1-4)
“Jehova, olee mgbe m ga-etiru mkpu ka i nyere m aka?” (2)
“Gịnịkwa mere i ji hapụ ndị na-emegbu ndị ọzọ?” (3)
Chineke ga-eji ndị Kaldia taa ndị ya ahụhụ (5-11)
Onye amụma rịọrọ Jehova arịrịọ (12-17)
‘Chineke m, ị naghị anwụ anwụ’ (12)
‘Ị dị ezigbo nsọ nke na ị naghị ele ihe ọjọọ’ (13)
1 Ihe a bụ ozi gbara ọkpụrụkpụ mụnwa, bụ́ Habakọk* onye amụma, nụrụ mgbe m na-ahụ ọhụụ. M kwuru, sị: 2 Jehova, olee mgbe m ga-etiru mkpu ka i nyere m aka, gị anụ?+ Olee mgbe m ga-arịọru gị ka ị napụta m n’aka ndị tigbuo zọgbuo, gị anapụta m?*+ 3 Gịnị mere i ji mee ka m na-ahụ ndị na-eme ihe ọjọọ? Gịnịkwa mere i ji hapụ ndị na-emegbu ndị ọzọ? Gịnị mere m ji na-ahụ ndị na-emebisị ihe ndị mmadụ na ndị tigbuo zọgbuo? Gịnịkwa mere e ji na-ese okwu ma na-alụ ọgụ ebe niile? 4 N’ihi ya, o nweghị onye na-edebe iwu,A naghịkwa ekpe ikpe ziri ezi. Ndị ajọ omume gbara ndị ezi omume gburugburu. Ọ bụ ya mere na a naghịzi ekpe ikpe ziri ezi.+ 5 “Leenụ anya ná mba niile, hụkwanụ ihe na-eme. Kporopụnụ anya na-ele ha, ka o jukwa unu anya. N’ihi na o nwere ihe ga-eme n’oge unuNke unu na-agaghị ekweta ọ bụrụgodị na a gwa unu ya.+ 6 E nwere ihe m ga-eji ndị Kaldia mee.*+ Ha bụ mba obi fere azụ na ndị na-eme ihe ọkụ ọkụ. Ha na-aga ọtụtụ ebe n’ụwaNa-eweghara ụlọ ndị na-abụghị nke ha.+ 7 Ha dị egwu, a na-atụkwa ha ụjọ. Ọ bụ ha na-etiri onwe ha iwu, na-enyekwa onwe ha ikike.*+ 8 Ịnyịnya ha na-awụ ọsọ karịa agụ owuru,Na-akpakwa ike karịa anụ ọhịa wolf ndị na-apụta n’abalị.+ Ịnyịnya agha ha na-awụ ajọ ọsọ. Ịnyịnya ha na-esi ebe dị anya abịa. Ha na-efe ọsọ abịa ka mgbe ugo ji ike na-efedata ka o rie ihe.+ 9 Ha niile na-abịa ka ha mebisịa ihe.+ Ha niile gakọọ ọnụ, ha na-adị ka ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ.+ Ha na-ekpokọrọkwa ndị ha dọọrọ n’agha otú e si ekporo ájá. 10 Ha na-akwa ndị eze emo,Na-achịkwa ndị isi ọchị.+ Ha na-achị ebe ọ bụla a rụsiri ike ọchị.+ Ha na-ekpokọta ájá ma weghara ebe ahụ. 11 Ha na-aga n’ihu n’ihu ka ifufe, gaferekwa ala ahụ. Ma ikpe ga-ama ha+ N’ihi na ha kwuru na ọ bụ chi ha nyere ha ike.”*+ 12 Jehova, ọ́ bụghị kemgbe ebighị ebi ka ị dị?+ Chineke m, Onye Nsọ m, ị naghị anwụ anwụ.*+ Jehova, ị họpụtara ha ka ha mee ihe i kpebiri. Oké Nkume m,+ ọ bụ maka ịta anyị ahụhụ* ka i ji mee ka ha dịrị.+ 13 Anya gị dị ezigbo nsọ nke na ọ naghị ele ihe ọjọọ. I nweghịkwa ike ịhapụ ihe ọjọọ ka ọ dịrị na-aga.+ Gịnịzi mere i ji hapụ ndị aghụghọ?+ Gịnịkwa mere i ji na-agbachi nkịtị mgbe onye ajọ omume na-eloda onye ka ya mma?+ 14 Gịnị mere i ji hapụ ka a na-eme ndị mmadụ ka hà bụ azụ̀ dị n’oké osimiri? Gịnịkwa mere i ji hapụ ka a na-eme ha ka hà bụ ihe ndị na-arị arị* na-enweghị onye na-achị ha? 15 Ha* na-eji nko azụ̀ adọpụta ihe a niile. Ha na-eji ụgbụ ha ejide ha,Ha na-achịkọtakwa ha n’ụgbụ ha ji akụ azụ̀. Ọ bụ ya mere ha ji na-aṅụrị ezigbo ọṅụ.+ 16 Ọ bụ ya mere ha ji achụrụ ụgbụ ha àjà,Na-achụkwara ụgbụ ha ji akụ azụ̀ àjà. N’ihi na ụgbụ ha na-eme ka òkè ha hie nne,*Na-emekwa ka nri ha na-edozi ahụ́. 17 Ọ̀ bụ ya mere ha ga na-eji awụpụ ihe ndị dị n’ụgbụ ha?* Hà ga na-ala mba dị iche iche n’iyi n’emereghị ha ebere?+
^ O nwere ike ịbụ na Habakọk pụtara “Ịmakụ Mmadụ nke Ọma.”
^ Ma ọ bụ “azọpụta m.”
^ Na Hibru, “M ga-eme ka ndị Kaldia bilie.”
^ Ma ọ bụ “na-ebulikwa onwe ha elu.”
^ O nwere ike ịbụ, “chi ha bụ ike ha.”
^ O nwere ike ịbụ, “anyị agaghị anwụ.”
^ Ma ọ bụ “maka ịdọ anyị aka ná ntị.”
^ Ya bụ, ndị Kaldia bụ́ ndị iro ndị Izrel.
^ Na Hibru, “maa abụba.”
^ O nwere ike ịbụ, “ga na-eji amịpụta mma agha ha?”